Fikradda Rabbi Moshe Rat - Rabbi Michael Avraham
Fikirka Rabbi Moshe Rat
Jawaabta > Qaybta: Falsafadda > Fikirka Rabbi Moshe Rat
Kobe La weydiiyey 7 bilood ka hor
Waxa aan rabay in aan waydiiyo waxa aad ka qabto habka fikradeed ee uu Moshe Rat taageersan yahay,
Aragtida ku habboon adduunka ee uu soo bandhigay, waxa ay si ballaadhan ugu doodaysaa in dhammaan xaqiiqadu ay tahay maskaxiyan, oo ka dhalatay miyir-qabka aadanaha, kuwaas oo ka soo jeeda miyir-qabka sare ee Ilaah.
Si kale haddii loo dhigo, xaqiiqadu waa nooc ka mid ah riyooyinka ka jira miyir-qabka shakhsi ahaaneed, kaliya xaqiiqadu waa riyo ay wadaagaan dhammaan bani'aadamka, ee maaha mid aad adigu leedahay.
1. Tani waxay ku saleysan tahay, waxyaabo kale, daraasado laga soo qaaday tirada (laga yaabo inay la xiriiraan saameynta kormeerka ee cabbirada, iwm.).
2. Iyo sida culimada fiisigiska oo caddeeyey in isku dayga lagu xaqiijinayo jiritaanka dhabta ah ee maaddadu ay dhamaantood fashilmeen, haddii ay sidaas tahayna xaqiiqada kaliya ee jirta ay tahay miyir-qabka. Maskax ahaan.
Sidoo kale, xaaladaha ay dhaqdhaqaaqa maskaxdu hoos u dhacaan oo ay naafo yihiin - dadku waxay la kulmaan khibrado garasho oo aad uga ballaaran marka loo eego xaaladda caadiga ah.
Tusaale ahaan xaaladaha geeri-ku-dhowaad ee waayo-aragnimada ama saamaynta daroogooyinka qaarkood. Oo sidaas daraaddeed waxay u soo dhowaanaysaa xaaladda miyir-beelka asalka ah. ~ / Midnimo. Iyo qaar kaloo badan.
4. Waxaa intaa dheer, sababtoo ah waxaa jira sababo badan oo habkan ah, sidoo kale waa sahlan tahay wuxuu ku doodayaa in la aamino.
5. Aragtida dhabta ah ee adduunkuna waa nacasnimo. Markaa halkii aad ku dheggan lahayd aragtida dhexe ee dunidu, qofku waxa uu u kobcin karaa horumarinta fikradda.
(Waxaan filayaa inuu qabo doodo kale oo badan laakiin runtii aan lagu wada qeexin dhamaantood).
Iyada oo ku saleysan hababkan, waxaa horeyba u jiray kuwa dhisa dhammaan noocyada moodooyinka si ay u sharxaan xaqiiqda.
Ka soo qaad in maskaxdu, marka loo eego habka Castrop-ga, ay si fudud u tahay "sida uu miyir-qabeenu u eego kormeeraha dibadda." Maskaxda iyo miyirku maaha laba shay oo kala duwan, laakiin maskaxdu waa muuqaal iyo muuqaal la taaban karo oo miyirka.
Su'aal tags: Idealism, Moshe Rat, Castrop
mikyab Shaqaale Waxaa loogu jawaabay 7 bilood ka hor
Rabbi Moshe Rat waa arday hore runtiina waan u mahadcelinayaa isaga. Ma la wadaagin qaar badan oo ka mid ah aragtiyihiisa iyo gaar ahaan u janjeerakiisa khiyaali iyo fikradeed. Doodaha aad halkan ku qortay magaciisa (ma garanayo tafaasiilkooda. Maan akhriyin) waxay iila muuqdaan kuwo aan sal iyo raad toona lahayn oo ay ka mid yihiin aasaaskooda cilmiyeed.
Sheegashada ah in xaqiiqadu tahay riyo ka jirta miyirka shakhsi ahaaneed waxay iila muuqataa mid iska hor imanaysa. Miyirkayga shakhsi ahaaneed waa ayo? My? Waxaan ula jeedaa waan jiraa? Aniga kaliya ayaa jira? Maxaan ugu malaynayaa in aniga oo keliya uu jiro oo dhammaan kuwa kale aysan jirin? Iyo xaqiiqada inteeda kale midkoodna? Oo weliba Ilaah baa jira? Sidee ayuu u garanayaa?
Oo xagga saldhigga "sayniska", ma aan fahmin waxa ku xidhidhka quantumku yahay. Saamaynta ay cabbirku ku leedahay xaqiiqada waa su'aal adag, laakiin fikradaha ayaa lagu kala qaybsan yahay, maantana waxaa cad in "cabbirka" uusan u baahnayn garashada aadanaha (xitaa cabbirka kombuyuutarku wuxuu burburiyaa shaqada mawjada), taas oo ka soo horjeeda wixii la aqbalay. suugaanta caanka ah. Iyo mid cajiib ah.
Kobe Waxay u jawaabtay 7 bilood ka hor
Anigu hadda kuma jiro dhammaan sheegashadiisa, kaliya wixii aan u soo maray si kooban oo ku saabsan iyaga. Waxa uu leeyahay sheegashooyin kale oo badan oo ku saabsan boggiisa sheeko.
Dabcan wuxuu u malaynayaa inay jiraan dad kale. Laakiin sida riyada qof kastaa sidan oo kale ugu riyoon karo adduunkeena ayaa miyirku ku wada riyoodaan dhexdhexaad miyir leh. Waxay ila tahay in tusaale ka mid ah nooc ka mid ah ciyaarta kombuyuutarku uu erayadiisa si wanaagsan u muujin karo. Waxa kale oo aan u malaynayaa in ay ka badan tahay habka metaphysical ee xaqiiqada iyo waa hab isku xidhan.
Laakiin si kastaba,
Maxaa igu yara adag mawduucan, sidee kula tahay in aad mawduucan ka hadasho? Mise arrimahan oo kale?
Sidee dhab ahaan xafladaha halkan ama meesha loo keeni karaa? Oo ka fiirsada gabagabada oo go'aan ka gaadho.
Ka dib oo dhan, waxay u caddahay qof kasta in sida uu Kant qabo aysan jirin wax caddayn ah oo ku saabsan jiritaanka koonka dhabta ah ee shayga laftiisa (Nuuma). Laakiin had iyo jeer waxaan la kulmaa oo kaliya ifafaale (marka laga reebo jiritaankeena)… Laakiin markaa maxaa labanlaabaya waxyaabo oo aan u qaadanayn in kaliya ifafaale uu shaqeeyo? (Sida nooc ka mid ah mandiilka Oakham haddii ay halkan iska leedahay gabi ahaanba)
Waxaan arkay in su'aashaadu tahay mid simbiriirixan leh oo ku saabsan shakiga guud ee kor u kacay, iyo laga yaabee in qolka jiifka;).
Laakiin, ma cadda in ay tahay in ay halkan ku soo baxdo sababtoo ah maaha hab shaki leh, laakiin fasiraadda metaphysical ee xaqiiqda.
Ma laga yaabaa in aan taas caksigeeda ku weydiiyo, muxuu Raabigu u qaatay laba-geesoodka iyo in dadka kale ay jiraan iyo in G- d uu jiro?
Waxaan filayaa inay taasi tahay sida ay isaga “u eg tahay”. Oo ma jirto sabab looga shakiyo iyo guud ahaan fahamkiisa iyo dareenkiisa maya? Laakiin fikradda ifafaale ee siinaya sharraxaad buuxda oo waxyaalahan ah daruuri maahan shaki sababtoo ah waxay u egtahay mid aad u badan sida * fasiraad * / beddelka kale. Mise uma eka in tani ay tahay sheegashada saxda ah (maxaa yeelay ugu dambeyntii waxay ka soo horjeedaa malo-awaalka ah in miis na hor yaal)?
Waxa kale oo aan u maleeyay in laga yaabo inay ahayd Bohrs oo aad ku sheegtay tixda 383 aad bay u adagtahay in fasiraaddan lagu dhaqmo, sababtoo ah waa af aan magacyo lahayn (marka laga reebo dadka kale) laakiin kaliya leh fal iyo falcelintooda. Laakiin dhanka kale, waxay u muuqataa in xitaa ciyaarta kombuyuutarku aanu ula dhaqanno walxaha sida jira. Oo haddii ay sidaas tahay mar labaad tanaasulku wuxuu u muuqdaa mid iswaafaqsan oo isku xidhan.
Garqaadkii u dambeeyay Waxay u jawaabtay 7 bilood ka hor
Markaa intuu erayo ka gunuunacsan lahaa, wuxuu ka tallaabsan jiray birta sare ee saqafka sare ah oo uu naftiisa ku dhimi jiray, ka dibna riyadii ayuu ka toosi jiray. Ama wuxuu ka taxadari lahaa inuu baabi'iyo cuf-jiidista riyadiisa oo wuxuu noo furi lahaa baabuurta riyada ee hawada sabbaynaysa.
mikyab Shaqaale	Waxay u jawaabtay 7 bilood ka hor
Ha fahmin erayadan, oo hubaal ma garanayo sida looga hadlo (ama arag wax dhibic ah oo sidaas lagu sameeyo).
Waan ka xumahay daahitaanka waxaan ahaa kaliya mashquul oo waxaan doonayay inaan faallo ka bixiyo.
Maan fahmin tirada dhibcaha ee xariiqan.
1. Marka hore xagga faham darada erayada.
Rabbaani ma fahmi karaa fikradda ah in sababta oo ah waxa aan ognahay oo dhan ay tahay "aragtidayada" kaliya ee ma aha shayga laftiisa. Markaa waxa la odhan karaa run ahaantii wax kasta oo jira marka laga reebo dadka kale, waxay ku jiraan oo kaliya in "ayga" aragtida. Uma baahnid in aan ku darsano mala-awaalka jiritaanka shay kasta. ~ Sida riyo. Kaliya halkan waa riyo la wadaago.
Hadday sidaas tahay.
2. Markaa hadda waxaan haysanaa laba ikhtiyaar oo aan ku macnayn karno xaqiiqada.
A. Waxaan arkaa miis oo runtii waxaa jira "qalab noocan oo kale ah" dibaddayga.
B. Waxaan arkaa miis, laakiin dhab ahaantii waxay ku jirtaa miyirkayga oo kaliya ee maaha dibadda. Waxa halkaas ku milmay arrin isku xidha tan aynu nidhaahno Gd. Iyo isuduwaha si ay dad badani u arkaan sidoo kale. Nooc ka mid ah ciyaarta dagaalka iskaashiga ee kombiyuutarka.
Hadday sidaas tahay, sidee loo dooran karaa sharraxaadda "saxda ah"?
Ka dib oo dhan, waxay noqon doontaa marka loo eego qeexitaanno gaar ah oo sheegaya A. in adduun noocaas ahi uu jiro. Iyo B. in aynaan waligeen la kulmin adduunkan si kastaba ha ahaatee, laakiin had iyo jeer aan la kulanno aragti ahaan.
Waxay u muuqataa mid macquul ah in la doorto sharraxaadda fudud haddii ay sharraxayso isla xogta iyo haddii ay sidaas tahay ay habboon tahay in la doorto B. Laakiin aniga iima cadda in tani ay sax tahay kiiskan. Iyo ugu badnaan hab-habboon. Laakiin halkan dadka intooda badani waxay u maleynayaan sida A.
Hadday sidaas tahay, waxaan waydiinayaa sida ku habboon iyo sida ay u tahay in laga hadlo arrintan.
Taa caksigeeda, haddii uu rabbaanku garan waayo sida loo falanqeeyo, muxuu u maleeyay in Rabbi Muuse khaldan yahay oo uu xaq u leeyahay?
3. Maxaad u arki la'dahay wax macno ah dooddan? Ma waxay tahay sababtoo ah awood la'aanta in laga hadlo (iyo haddii ay sidaas tahay, markaa sidee buu qofku uga hadli karaa "qaladka" habkan). Ama sababtoo ah ma jiro NFKM (laakiin xitaa tani maaha mid sax ah, waxaa jira wax badan oo ku saabsan jiritaanka iyo falsafada heerka falsafada, sida taageerayaasha habkan ay sheeganayaan)
4. Jir ahaan, waxaa suurtagal ah in la keeno dhammaan noocyada caddaynta maadaama walxaha ugu muhiimsani ay dhab ahaantii yihiin beero, iyo in ay u dhaqmaan si la yaab leh (sida xawaaraha iftiinka, iyo xawaaraha aan xadidnayn, ilaalinta kharashka taas oo muujinaysa sharciyada ka baxsan dabeecadda. iwm.). Oo ma jiraan sida shay dhab ah laakiin kaliya sida "suurtogal" ama beer. Haddana waxay leeyihiin saamayn dhabta ah. Waxaan filayaa inay jiraan kuwa Ilaah ka helay arrintan. Taas oo ka kooban beeraha ama sharciyada dabiiciga ah per se.
Kaliya halkan qaado hal tilaabo oo kale oo hore oo qayb ka ah miyir-qabka la wadaago.
Iska dhaaf dib u dhaca, laakiin way adag tahay in laga wada hadlo, gaar ahaan maadaama aad ku celinayso waxyaalihii aan sharaxay. Waxaan kaga jawaabi doonaa si kooban.
1. Waxaan ku macneeyey in aanan fahmin erayada. Haddii aysan waxba jirin markaas aniguna ma jiro. Haddaba jiritaankeyga yaa ku jira mala-awaalka? My? Oo haddaad tidhaahdo waan jiraa oo inta kale oo dhan ma jiraan, maxaad ka faa'iiday? Haddii aad hore u malaysay in ay wax jiraan ma jirto sabab aad ugu darto in waxyaabo kale ay sidoo kale jiraan. Ka dib oo dhan, tani waa dareenkeena.
2. Sharaxaada saxda ah waa waxa aniga iila muuqda mid dareen leh.
3. Runtii lama wada hadli karo. Tani maahan in la yiraahdo halkan wax run ah ma jiro. Aragtidaani run maaha sida aan qabo, lagamana hadli karo. Sidoo kale sharciga sababuhu aniga ila tahay oo ilaa hadda lagama yaabo in laga doodo ama la caddeeyo cidda aan aqbalin.
4. Waxba kuma laha fiisigiska. Fiisigisku ma dhahayo wax ma jiraan, laakiin maahan inay yihiin waxa aan u aragno inay yihiin (mana aha sax).
Hadalladani maaha kuwo aad u xiiso badan, mana arko wax macno ah oo ku saabsan dooddan.
Xashiishada Waxay u jawaabtay 7 bilood ka hor
1. Tani gabi ahaanba run ma aha sababtoo ah haa way ku raacsan yihiin in dadka kale ay jiraan, khaladkuna wuxuu ku jiraa kaliya fasiraadda ujeeddada jiritaanka waxyaabaha dibadda ah ee aan miyir-qabka ahayn.
2. Waan fahamsanahay, kaliya magacan ayaa sidoo kale lagu dhisay sheegashooyin dheeri ah iyo in haddii ay sidaas tahay ay hagaajiso bilawga hore. Sida nooc ka mid ah caddaynta falsafada iyo muujinta Gd.
3. Ka hadal haddii aad ula jeedo kartida aad ku gaari karto gabagabada oo hubi in ay jirto daacadnimo iyo isku xirnaan jaahilnimo? Laakiin haddii ay sidaas tahay, maxaad u malaynaysaa sheegashadaada in aad runtii u aragto xiisaha hadal-haynta. Iyo guud ahaan doodaha…
4. Hagaag, kani waa mowduuc xiiso leh oo in badan ka soo baxa suugaanta caanka ah, halkan mareegtan sidoo kale waxay ka soo baxdaa waqti ka waqti, sidoo kale waxaa loo adeegsadaa dadka diinta oo dhan, iyo kuwa fikradda ah oo jiho kale u ah, laakiin Narali waxay u baahan tahay balaadhinta lafteeda.
1. Iyada oo ku saleysan waxa aad sheeganeyso in ay jiraan dad kale? Iyo in iyaga ku saabsan aad ka haysatid macluumaad toos ah, oo ka soo horjeeda jiritaanka ujeedada miisaska?
3. Meelo badan ayaan ku macneeyay hadal-hayntu waxa ay tahay. Kuwani waa sheegashooyin ah in aysan jirin waddo lagu baaro, sababtoo ah ku alla kii iyaga xoojiyaa wuxuu diidi doonaa dood kasta si la mid ah (laga yaabee tani waa uun dhalanteedkayga). Sidaa darteed anigu wax macno ah uma arko doodan.
1. Waxaan filayaa in lagu doodi karo inta badan ku salaysan garashada. Laakiin haddii ay sidaas tahay, waxaad tidhaahdaa miiska runtii jira waa sidaas oo kale.
Markaa hel. Wax ka fiican ma aragtaa?
2-3. Mahadsanid. hadda waan helay.
4. Sida aan soo sheegay oo ku saabsan xidhiidhka ka dhexeeya cilmiga casriga ah iyo sayniska iyo falsafada iyo fiqiga, waxaan jeclaan lahaa in aan weydiiyo, kaliya waxaan jeclaan lahaa in aan hoos u dhaco mawduuca marka hore. Sababtoo ah waxay aad ugu badan tahay suugaanta iyo suugaanta caanka ah. Halka hadalladaada halkan ay yihiin kuwo la yaab leh (fiisigiska casriga ah ayaa laga yaabaa inuu muujiyo in waxyaalaha aan aragno ay dhab ahaantii sidaas yihiin). Haddii aanan si buuxda u qaadan ujeeddadaada wareega malaha 🙂
Run ahaantii waxaan u maleynayaa in tani ay tahay mowduuc weyn oo ku filan tiirka gaar ahaan in aad tahay dhakhtar.
RAAM iyo "Takia"
doonista xorta ah
mikyab Daaran Ka jawaab doorashada xorta ah
ardayga Yeshiva Daaran Ka jawaab doorashada xorta ah
mikyab Daaran Ka jawaab su'aalaha Amaretz
mikyab Daaran Ujawaab xisbi carbeed oo dawlada ka tirsan
ardayga Yeshiva Daaran Ka jawaab su'aalaha Amaretz